Cambaareyn Xadhiga Wariye Cabdiraxmaan Carab Daa'uud...Ururka SOMA
Wednesday April 12, 2017 - 19:00:27 in Wararka by xasme axmed ismaciil
Hargeysa(Hargeisa-News)ciidanka Booliska Somaliland waxay shalay gelinkii dambe xabsiga u taxaabeen Wariye Cabdiraxmaan Carab Daa'uud oo u shaqeynayey Shabakada Wararka Hangoolnews. Waxa naloo sheegay in unug Boolis ahi suxufigan kala baxeen Xafiiska uu ku shaqeynayey oo ku yaalla Dhismaha Imaaratul-khayr. Boolisku waxa kale oo sida naloo xaqiijiyey ay qaateen qalabkii uu ku shaqeynayey iyo mid kale oo xafiiska yaallay.
Boolisku markii ay howlgalkan fulinayeen wax Waaran ah may sidan, manuu ogolaanshiyo sharci oo ay Xafiiskan ku galeen Wariyahana ku xidheen.
Sidaas darteed anigoo ku hadlaya Magaca Ururka Warbaahinta Mareegaha Somaliland (SOMA), waxaan cambaareynayaa xadhiga Wariye Cabdiraxmaan Carab Daa'uud, oo aanu u aragno mid sharci-darro ah, isla-markaana qaabka loo fuliyey iyo asbaabihiisaba xad-gudub iyo gabood fal ku yihiin mabaadi'da iyo ujeedooyinka jiritaanka Madaxbanaanida Saxaafada.
Annagoo og inaanay ahayn markii ugu horaysay ee saxafi loo xidho sidan kale, isla-markaana boolisku iyagoo haysan ogolaanshiyo Maxkamaddeed oo ay ku cadyihiin Dambiga Saxaafaddi gashay ay weerar ku qaadaan xarun warbaahineed ama wariye, haddana waxaanu ka walaacsanahay inay wali sii socdaan xad-gudubyada noocaas ahi.
Ugu dambey, ururka SOMA waxa uu ugu baaqayaa Xukuumadda Somaliland, gaar ahaan Taliska Ciidanka Booliska, in si dhakhso ah xoriyadiisa loogu soo celiyo wariyaha xidhan, oo haddii uu jiro fal-dambiyeed Saxafigu galay loo maro si waafaqsan Shuruucda dalka iyo xeerka Saxaafadda Somaliland ee Xeer Lr.27/2004.
Mar kale Taliyaha Ciidanka Booliska Somaliland, waxaanu xusuusinaynaa in Ciidanka Boolisku dhowro Shuruucda dalka ee damaanad qaadaya xurmadda Wariyaha iyo xoriyada Saxaafadd. Ururka SOMA wuxuu dhiiri-gelinayaa madaxbanaanid Saxaafadda oo ku dhisan Anshaxa suubban, waxaanu ka digayaa inay sii socdaan talaabooyinka lagu cabudhinayo Saxaafadda oo aannu aragno inay dhaawacayaan nidaamka Dowladnimo iyo dastuurka dalka.
Xoghayaha Ururka Warbaahinta Mareegaha
Somaliland. (Somaliland Online Media association).